प्रभु बैंक वीरगंज शाखाकाे अभद्र व्यवहारले सेवाग्राही आक्राेशित
by कालिका टाईम्स १९ आश्विन २०७७ १३:५४5October 2020 01264
वीरगंज । प्रभु बैंक वीरगंज, आदर्शनगर शाखाले सेवाग्राहरुसंग अभद्र व्यवहार गर्नुकाे साथै अपमान गरिरहेकाे छ । बैंकले सेवाग्रहरीहरुलाई बाहिर चर्काे घाममा खडा गरी आफ्नै पैसा झिकन र निकाल्न सास्ती दिइरहेकाे छ ।
काेराेना महामारीकाे समयमा पनि बैंककाे गेटमा सामाजिक दुरीकाे धजिया उडाउदै भिड लाग्ने गरेकाे छ । तर बैंक भित्र खाली र बस्ने ठाउँ भएपनि गार्डहरुले सेवाग्राहरुसंग अभद्र व्यहार गर्दै बाहिर गेट मै खडा गरी भिड लगाउने गरेका छन् ।
सेवाग्राहीले बाहिर घाम छ भित्र गएर बस्न दिनुस् न भन्दा पनि जान पाइदैन भन्दै अपशब्द प्रयाेग गर्दै अपमानसमेत गर्ने गरेका छन् । बैंक भित्र राखेकाे आफ्नै पैसा निकाल्न र जम्मा गर्न पनि बैंककाे अपमान सहन बाध्य भएका सेवाग्राहीहरु आक्राेशितसमेत भएका छन् ।
बैंककाे यस्ताे रवैयाले बैंक भित्र काेराेना भाइरस संक्रमण सर्ने र बाहिर जति भिड भाड गरे पनि नसर्ने देखिएकाे छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बैंक संचालन गर्दा समाजिक दुरीकाे पालना गर्नु पर्ने, अनिवार्य मास्क र सेनिटाइजरकाे प्रयाेग गर्नु पर्ने दिएकाे निर्देशनकाे समेत पालना नगरी बैंकले काेराेनाकाे जाेखिमसमेत बढाएकाे देखिन्छ ।
त्यसै सम्बन्धमा बैंकका प्रबन्धकसंग कुरा गर्न खाेज्दा गार्डहरुले पत्रकारकाे प्रबेशमा समेत राेक लगाएका छन् । पत्रकारले प्रबन्धक ज्यूसंग भेटनु छ, भन्दा पनि गार्डहरुले पत्रकारकाे प्रबेशमा राेक लगाउदै अपमानसमेत गरेका छन् । गार्डहरुलाई पत्रकारले आफ्नाे परिचय पत्र देखाउदा पनि बैंक भित्र प्रबेश गर्न दिएका छैनन् ।
गार्डले बैंककाे नम्बरमा कुरा गर्नुस भित्र जान पाइदैन भन्दै एक पत्रकारलाई अभद्र व्यवहार गर्दै अपमान गरेका हुन् ।
यस बिषयमा बैंकका प्रबन्धक राेहिनी अचार्यसंग कुरा गर्दा बैंक भित्र काेराेना सर्ने जाेखिम बढी भएका कारण सेवाग्राहीलाई बाहिर राेकिएकाे वताए । बाहिर सेवाग्राहरुलाई समाजिक दुरी पालना गरेर बस्न भन्दा पनि नमानेका कारण भिडभाड देखिएकाे भन्दै गैर जिम्मेवारपूर्ण जवाफ दिए ।
पत्रकारलाई समेत बैंक प्रबेशमा राेक लगाउनु भएकाे प्रश्नकाे जवाफमा बैंककाे नम्बरमा फाेन गरेर समय लिएर भेटन सकिने वताए ।
प्रभु बैंककाे यस्ताे रवैया एउटा प्रतिनिधि मूलक घटना मात्र हाे । यस्तै वीरगंजका अधिकांश बैंकहरुकाे रवैया रहेकाे छ । त्यसैले यसतर्फ सम्बन्धित निकायकाे ध्यान पुग्न जरुरी देखिन्छ ।
SQL requests:152. Generation time:0.950 sec. Memory consumption:14.82 mb